Solar Panel, Power Inverter, Solar Charge Controller, PWM Controller, China Vaiti nevatengi
Takashandurwa Sine Wave Inverter
Yakachena Sine Wave Inverter
Low carbon, environmentalprotection, energy saving.
Longchi - Rudo rweAfrica
Usiku, uchishandisa folar chiedza system yekuverenga mabhuku
solar panels for use home
solar generated generators
solar simba kumusha
simba kumba kumba kwezuva
Zhejiang Longchi Technology Co., Ltd. ndiyo kukosha kwekugadzirwa kwemhepo kwezuva, kushandiswa, Kutengesa uye kushandiswa kwemabasa matsva emabhizimisi emagetsi. Ikambani yakanyatsogadzirwa nekugadzirwa kwezvinhu, chigadzirwa chekugadzirisa uye kugadzikana, yakapfuura ISO9001 yehutano hwehutano hwekugadzirisa, chigadzirwa chikuru kuburikidza nehupfumi hwehutungamiri hweSGS, CE certification, rondedzero ye ROHS uye kuwana chirongwa chakakodzera.
Chimiro chinotakura nzvimbo ye 56667 mita mamita, nzvimbo yekuvaka ye 55935 mita mamita, uye yakanyoreswa guta reRMB 20million.
Zvinhu zvakakura zvinogadzirwa nezuva rePV modules, solar power generation system, 80% yemiti yakatengeswa kuAfrica Europe, North America, Australia. iyo Middle East, Southeast Asia, inorumbidzwa nevashambadzi vekune dzimwe nyika uye kune dzimwe nyika, zvechokwadi i "low carbon inodzivirira zvakatipoteredza simba rekuchengetedza magetsi emagetsi emagetsi". Kambani ine vagoveri vakawanda vari pamba uye kune imwe nyika, vakagamuchira vazhinji vevashandi kugamuchira uye kurumbidzwa. unoda kushumira basa rekutanga-kirasi nevashambadzi vemisha nevevatorwa vatsva nevashambadzi vekare vanoisa mumaoko kuti vaumbe "upenyu hwezuva". Read more
Tinopa hutano hwakanaka uye michina yekusimbiswa kumakambani anobva kumativi ose enyika.
Kubatana kwatinoita kwenguva yakareba nemakambani ekufambisa kwepasi uye makambani anotsanangura, vanogona kuvimbisa kuti zvinhu zvakapiwa munguva pfupi.
Kupa basa rinokurumidza kuvimbika, rinoteerera uye rinodhura, kuitira kuti tiwane zvinodiwa nevashandi vedu vebasa.
Isu tinobatsira kupfuura 3,000 pasi rese vatengi-kupfuura 30% yevatungamiri venyika-vatengesi-nzvimbo munzvimbo dzavo dzebhizimisi uye vanoshandura dunhu rehutano mukuita zvisarudzo zvakanaka zvemabhizimisi.
Simba rezuva rinopisa chiedza-kurema uye kutonhora kubva kune Sun iyo inotungamirirwa kushandiswa kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvinogara zvichidzidzira sezvinoita kupisa nyeredzi, photovoltaics, nyeredzi inopisa simba, nyota yekugadzira, mashizha emvura emunyu nemafuta echimiro ... Read more
Inguva yakadini mashizha ezuva anoguma
25 makore (kana yakapfuura). iyi inogona kunge iri bhizinesi rinowanzovimbiswa kubva kune Muiti mumwe anoita. Muzvokwadi, nyanzvi dzenyeredzi dzichagara kwenguva yakareba kwenguva refu kupfuura iyo: vimbiso inowanzochengetedza mapapanhau anogona kushanda pamusoro pemakumi masere makumi mapfumbamwe emakore makumi maviri nemashanu. Chidzidzo cheNREL chinoratidza kuti zvakawanda zvepaneti achiri manyo ... + Verenga zvakawanda
Ndeapi mapaneji ezuva akawanda wandinoda kumusha wangu?
Kusarudza kuwanda kwesimba rako rezuva kunotanga nemubvunzo wakajeka: ndeapi nhamba dzenhambaredzi dzandinoda? Sezvo vanhu vose vachida kupa simba rakakwana rokuparadza zvachose magetsi avo, danho rekutanga nderokuti chii chinoshandiswa nehurongwa chinogona kupa simba rakakwana kuti rizadzise yako unit use ... + Verenga zvakawanda
Solar Panels Inoshanda Sei?
Yakarongerwa sechivimbiso chinopa simba kwemakore mazhinji, nyeredzi inowanika korona pamusoro pematenga uye zviratidzo zvepamusoro, uye inoita kuti uchengetedze nhebiter. asi zvisinei kunyange zvakadaro nyeredzi dzinoita basa? Zvichinyatsojeka, rimwe zuva rinoshandisa kuburikidza nekubvumira photons, kana zvikamu zvezuva, kugogodza magetsi asingasviki paatomu, zvichiita kuti magetsi aende. ... + Verenga zvakawanda